“मलाई लाग्दैन कि नेपालले अब उपरान्त कुनै पनि विश्वकप गुमाउनु पर्नेछ।” – पुबुदु – WicketNepal
“मलाई लाग्दैन कि नेपालले अब उपरान्त कुनै पनि विश्वकप गुमाउनु पर्नेछ।” – पुबुदु
WicketNepal Staff, २०७८ पुष १३, मंगलवार १५:२१
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका नव नियुक्त मूख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायेके मंगलबार जिम्मेवारी नेपाल आइपुगेका छन्। यस अघि २०११ देखि २०१५ सम्म नेपाली राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षण सम्हाल्दै नेपाललाई टि-२० विश्वकप तथा विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप र एकदिवसीय विश्वकप छनोटसम्म पुर्याएका पुबुदुले नेपालको मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा दोश्रो कार्यकाल सम्हाल्नेछन्। नेपाल आगमन पछि पुबुदुले मिडियाहरुसंग गरेको कुराकानी-
नेपाल फर्किंदा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
“फेरी फर्किंदा खुसि छु र चुनौतीको लागि तयार छु”
तपाई सामु कस्ता चुनौती छन् ?
२०११ मा आएको भन्दा फरक चुनौती छ। त्यो बेला टिम डिभिजन-४ मा थियो। अहिले नेपाल एकदिवसीय र टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त देश हो। त्यसैले मैदानमा चुनौती फरक छ। धेरै फरक कुराहरुमा काम गर्नु छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ कि म नेपाललाई माथिल्लो स्तरमा , विश्वकपमा पुर्याउदै नेपालमा सकारात्मक वातावरण बनाउन चाहन्छु।
नेपाल आउनु अघि के-के कुरा सोच्नु भएको थियो ?
यदी क्रिकेटको कुरा गर्नु हुन्छ भने यहाँ धेरै कुरा सुधार गर्नु पर्नेछ। एउटा सकारात्मक कुरा हामिसंग प्रतिभावान खेलाडीहरु उत्पादन भैरहेका छन्। विश्व क्रिकेटको संरचना परिवर्तन भएको छ र नेपालले त्यो संरचनामा आफुलाई ढाल्नु पर्छ। त्यसैले धेरै योजना र कामहरु गर्नु छन् जसको लागि म उत्साहित छु।
नेपाली क्रिकेटको वर्तमान परिस्थिति, क्यान र खेलाडी विवादलाई कसरि समाधान गर्ने सोच्नु भएको छ ?
मलाई लाग्छ यो विश्वभर हुने सामान्य कुरा हो। र मलाई लाग्छ म कोठामा पुगेर के गर्नु पर्ने हो छलफल हुनेछ। मलाई विश्वास छ खेलाडीहरुले मलाई र सबै व्यवस्थापनलाई एउटा टिमको रुपमा अघि बढ्न सहयोग गर्नेछन्। मलाई लाग्छ सबै भन्दा ठूलो कुरा व्यक्ति हैन, नेपाल क्रिकेट र नेपाली क्रिकेट टिम हो। त्यो दिशामा अघि बढे सबै कुरा समाधान हुनेछ।
नेपाल आउनु अघि खेलाडीहरुसंग सम्बाद भएको छ ?
म केहि खेलाडीहरुसंग सम्पर्कमा छु। सामान्यत म्यासेजहरुमा। सबै जना म आउदा सकारात्मक छन्।
टि-२० विश्वकप छनौट बारे तपाईको योजना के छ ?
हामिसंग तयारी गर्न समय छोटो छ। तर नेपालसंग प्रतिभावान खेलाडीहरु छन्। हामीले सबै झिना मसिना कुराहरुको समाधान गरेर अभ्यासमा जानु पर्छ। मलाई लाग्दैन कि नेपालले अब उपरान्त कुनै पनि विश्वकप गुमाउनु पर्नेछ।”